IFTIINKACUSUB.COM: Dab qabsaday Dhismayaasha Dunida ugu dhaadheer ee ku yaal Dubay .
Dab qabsaday Dhismayaasha Dunida ugu dhaadheer ee ku yaal Dubay .
Jimce,04/8/2017, Dab aad xooggan ayaa waxa uu qabsaday dhismo aad u dheer oo ku yaalla magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, waana markii labaad ee dabkani uu qabsado mudo labo sano gudahood ah.
Dabaqan uu dabku qabsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Torch Tower, waxaana uu ka koobanyahay tiro dhan 79 dabaq, iyada oo shaqada uu bilaabay tariikhdu markii ay ahayd 2011-kii.
Waxa uu ahaa dabaqani xiligaasi midkii ugu dheeraa Aduunka,inkastoo wakhtigan xaadirka ah ay tiraba 6 dhisme oo kale ay kor uga dhaadheer yihiin.
Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa cadaynaaya in uu dabku uu yahay mid aan yarayn ,mararka qaarna laba arkaayey Qiiqa iyo holaca ka baxaaya dhismahaasi.
Xukuumadda ayaa waxa ay warbaahinta ka sheegtay in ay dhamaan wixii dad ku jiray ay ka daadguraysay isla markaana aanay cidina wax ku noqonin,taasoo markii danbana dabkii la xakameeyey si anu ugu fafin meelo kale.
Ma jirto ilaa hadda, lamana hayo wixii sababay in dhismahani uu dabku qabsado ama uu Gubto,sidoo lalana lama soo sheegin cid wax ku noqotay ama ku dhaawacantay, sida ay Twitterka ku soo qoray xafiiska warbaahinta ee Dubai;iyada oo uu wali socdo hawlgalkii lagu bakhtiinaayey dabka.
Doorashada ka dhaci doonta Jarmalka 2017 bisha 9-a...
Shirkadda flydubai oo go'aan kasoo saartay dhacdad...
Nin sheegay in uu khaati ka joogo cunista Hilibka ...
Siddee Lagu Bartaa Xisaabta?Xisaabta lama xafido b...
Fikir walba waxaa curiya dadka wakhtigaasi nool.
Wasiir Cali Mareexaan arintii FLY-Dubia isagaa bu...
Todoba Waxyaabood Iska Ilaali Cuntada Kadib.
Wakhti badan hayskaga lumin shaqo aadan niyad u ha...
Dhaqamadii Qoyska ee iigu yaabka badnaa wadanka Pa...
Madaxwayne Qurxinta Jidhkiisa ku bixiyey kharash d...
Qiso yaableh: Waraysigii gabadhii Jinniga ahayde ...
Cabdiraxmaan Talyanle oo si dadban oo sharciya gud...
Dalka Hindiya ayaa mamnuucay furitaanka Dumarka ee...
Xuduud isticmaar mise xuduud isirnnimo(Qabiil)??!!...
Laan-kuruuser Gado, Soo Bari Galley!
Adeegsiga Qabyaladda ma layarayn karaa?
Markay Danbiyadii yaraadeen ayaanu Xabsiyadii qaar...
Mufakir siyasadeed Cawil Cabdilaahi Xayd (Af-sarka...
Maxay dadka qaar uga cabsadaan in ay Khudbadeyaan?...
Noocyada Dhibaatooyinka Araga Iyo Sababaha Keena.
Qiso yaableh: Guurkii gabadha Jinka ahayd ee Aamin...
Xujeyda Somaalida oo ka cabaneysa mukhalasiinta ku...
Qiso yaableh: Intaydaan i Toogan ii ogolaada in aa...
Qiso yaableh: Magaca Caruurta dhalata loo bixiyaa ...
Ha-la tageero Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Xisb...
Waligaa miyaad aragtay Kalluun Lugo iyo Gacmo leh?...
Ujeedo xil-magacaabis cusub oo Xisbiga Ucid uu sam...
Faalo: Dilka iyo siidaynta Dable Axmed Caydiid max...
Cunista hilibka Lo'da ee dalka Hindiya oo ka cadha...
Warbixin cusub: Hal Bilyan oo Tan oo cunto ah ayaa...
Maxaad ka taqaan Astaanta cad ee ku taal xagga sar...
Waa kuma Sheekh Mukhtaar Roobow Abu-maansuur?
Baarlamaankii Somaliland Dawadiisii waa la helay.
Mukhtaar Roobow Abu-maansuur oo Xamar la keenay,is...
Qiso yaableh: Madaxwaynahii hore ee Somaliya Xasan...
Qiso yaableh:Lafaha dadka dhinta oo Koobab wax lag...
Ma ogtahay in Doorashada Kenya ay ku dhisan tahay...
Maxkamada Sare ee Somaliland oo go'aan kasoo saart...
Qiso yaableh: Aabe Ilmayar oo uu dhalay qayb ka mi...
Uhuru Kenyata Oo Ku Guulaystay Doorashadii Madaxti...
Qiso yaableh:“Salaadda ayuu tukanayay markii qasab...
Qiso yaableh: Muddo dhan 14 sano ayay xabsi ugu ji...
Wax ka baro Tariikh nololeedkii madaxwaynaha Zimba...
Qiso yaable: Waraysigii gabadhii Jinniga ahayde e...
Suuqa ugu wayn Gaarisa oo hada Dab la qabad siiyey...
Gudoomiye Cirro kursiga xaal kumuu helin ee waxa d...
Xigmad Siyaasadeed:Magacaygu maaha Dameer balse wa...
Mukhtaar Rooboow Abu-maansuur oo Shabaab Afar-jaho...
Xisbiga Mucaaradka ah Kenya oo sheegay in la xaday...
Qiso yaableh: Nin Masaajid u dhisay istus iyo isma...
Hooyadii dhashay IHN Wasiir Siraaji oo codsatay in...
Xisbiga Wadani oo laba jibaaray,ololaha ay ugu ji...
Markab darxiis oo 104 maalmood Laydhku u bakhtiisn...
Doorashadii Kenya oo ila hadda si fiican u socota....
Heshiis dhex maray Madaxdii hore ee Somaliya Xasan...
Madaxwaynaha Somaliland oo magacaabay Degmooyin cu...
Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo Xabsiga loo taxaaba...
Wakiilkii Xisbiga Ucid ee dalka South Afrika Maxam...
Gaadhi wayn oo ay leeyhiin ciidanka AMISOM oo Muqd...
Somaliland waanu aqoon sanaynaa hadii aanu doorash...
Sheekh Samaroon Ayaan Manaam Ku Arkay Waxa Uu Isoo...
Madaxwaynaha Puntiland oo maanta magacaabay Golahi...
Cornayl Sakiya Xusseen ayaa maanta loo magacaabay ...
Gudoomiyaha Guurtida oo wax aan suura gal ahayn ku...
Xildhibaan Talyanle oo sheegtay in uu yahay Gudoom...
Dab qabsaday Dhismayaasha Dunida ugu dhaadheer ee ...
Saladiinta Beesha Arab oo markii u horaysay si wad...
Ciidanka AMISOM oo bilaabay in ay Shabaab u baneya...
Haddii Aad Doonayso Ilme Maskaxdiisu Dhisan Tahay ...
Dabeecadda wanaagsani waa guusha Madaxnimada.
Qisso yaableh:Tuulo sabab la'aan u gubata kadibna ...
Sadax dhalinyaro Somaliyeed oo lagu dilay South Af...
Madaxwayne ku faanay in aanu waligiis xanuusanin!!...
Is-macasalamayntii Cabdiraxmaan Cirro iyo Madaxway...
Caruusad ninkeeda ula soo baxday Bistoolad ,habeen...
Wasiirkii hore ee A.Gudaha Cabdillaahi Ismaaciil C...
Gabadh dhashay Ilmo aanay Hooyo u ahayn!!
Maanso cusub oo la magac baxday ALLE KA CABSI ,wa...
Aqoon korodhsi ,Qaabka iyo Hanaanka Daawada loo li...
Qiso yaableh:Nin jecel in uu markasta Afka ku hayo...